musha More Formula One Drivers Bio Charles Leclerc Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Childhood Biography inopa Nyaya Yakazara yemutyairi wemujaho weMonégasque ane zita remadunhurirwa “Mukuru wemauto".
Yedu vhezheni yeCharles Leclerc's Biography, kusanganisira Nhau yake Yehudiki, inounza kwauri nhoroondo yakazara yeanozivikanwa ezviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Charles Leclerc Biography - Kubva paMazuva Ehudiki hwake kusvika panguva yeMujaho Mukurumbira.
Ongororo yedu yeCharles Leclerc's Biography inosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga, nhoroondo yemhuri, nyaya yehupenyu mukurumbira uye kusimuka kune mukurumbira nyaya.
Zvikuru, Mukadzi waCharles Leclerc, hupenyu hwepauzima, chokwadi chemhuri, mararamiro, uye zvimwe zvidiki zvisingazivikanwe chokwadi nezvake.
Hongu, munhu wese anoziva nezvekukurumidza kusimuka kwake muFormula 1. Zvisinei, vashomanana chete ndivo vanofunga nezveCharles Leclerc's biography, iyo inofadza chaizvo. Zvino, pasina imwe ado, ngatitangei.
Charles Leclerc Childhood Nhau - Hupenyu hwepakutanga uye Nhoroondo Yemhuri
Kune Vatangi veBiography, mutyairi weF1 Race Charles Leclerc akazvarwa pazuva regumi nematanhatu raGumiguru 16 kuMonte Carlo, inzvimbo yekutonga yePrincipality yeMonaco (nyika iri kuWestern Europe).
Ndiye wechipiri pavana vatatu akazvarwa kuna baba vake, Hervé Leclerc, uye kuna amai vake, Pascale Leclerc. Tarisai, vabereki vaCharles Leclerc.
Ngatikuzivisei kuvabereki vaCharles Leclerc. Baba vake vanonzi Hervé Leclerc uye amai vake vanonzi Pascale Leclerc.
Charles Leclerc Mhuri Mavambo:
Nyika yeMonégasque yerudzi chena ine midzi isingazivikanwe yakakurira kuguta rake rekuzvarwa - Monaco kwaakakurira pamwe chete nemukoma Lorenzo nemunun'una wake Arthur.
Kukura muMonaco, Young Leclerc akakwezvwa kumhanyisa kubva pazera diki kwazvo.
Muchokwadi, aingova 3 nehafu yemakore apo baba vake Hervé vakatanga kuenda naye kumitambo yemijaho pamwe nekumusuma ku karting, inozivikanwawo seNursery yevose vatyairi veF1.
Charles Leclerc Dzidzo uye Basa Rekuvaka:
Panguva iyo Leclerc akange ave zera 4, akatarisa Monaco GP yake yekutanga kubva pafurati rakatarisa mujaho wetsiva paSainte-Devote, chiitiko chaakasanganisira nekufungidzira kwemumhanyi pamatanho akafanana rimwe zuva.
Iye ane-makore-mana-ekukurumidza akarwara pane rimwe zuva uye akafunga kuzorora kuchikoro.
Panzvimbo pekuzorora kwezuva rese, Leclerc akaperekedza baba vake kunoshanyira mujaho wetii yaive nababa veaimbova Race Mutyairi Jules Bianchi. Achiri munzira, akasvetukira paKart uye akanakidzwa nekurova kusvikira mafuta apera.
Charles Leclerc Biography - Hupenyu hwepakutanga mujaho:
Mushure meizvozvo, Karting akave chikamu uye chikamu chehupenyu hwaLeclerc kunyanya pakati pemakore 2005-2010 paakange aine basa rinogutsa mumutambo uye akatonga makirasi akasiyana aakakwikwidza maari.
Pamusoro pebasa rake reKarting muna 2011, Leclerc akatsigirwa naNicholas Todt - mwanakomana wemutungamiri weFIA Jean Todt - aitarisira manejimendi emutyairi izvo zvakamuita kuti arambe achimhanya asingaise mutoro wemari kuvabereki vake.
Chiitiko ichi chakave zvakare nechokwadi chekuti Leclerc anga asiri kure neshamwari yake yakanaka akashandura godfather - Jules Bianchi sezvo vese vari vaviri vari pasi pekutsigirwa nekambani yaTodt yekuchengetedza inozivikanwa seye All Road Management kambani.
Charles Leclerc Biography - Rwendo rweMukurumbira:
Leclerc akakurumidza kupinda muFormula Renault mu2014 uye akatanga kukwira kuburikidza nemazita aive akazara nematambudziko.
Kutanga kwaive kufa kwababa vake vaimutsigira godobori Jules Bianchi uyo akapa mweya mushure mekuve mumwedzi gumi nematanhatu coma yekukuvara musoro kunotyisa kwaakatsigira achityaira Marussia muF13.
Anenge makore matatu gare gare mu2017, Leclerc aikwikwidza muFormula 2 paakarasikirwa nababa vake Hervé kumaoko anotonhora erufu zuva rimwe chete kumjaho wake kuAzerbaijan Grand Prix.
Chiitiko ichi chakaita kuti zviome zvakanyanya kuti Leclerc atarise pakuita. Kunyangwe zvakadaro, Leclerc ane moyo wakaremara akazvidhonza pamwe ndokuenderera mberi achipedzisa kutanga uye wechipiri mumakwikwi ese aakatsaurira kuna baba vake.
Charles Leclerc Biography - Simuka Kukurumbira Nyaya:
2018 ndiro gore iro Leclerc akaita Formula 1 yake yekutanga kuSauber, timu yaakabatsira kuvandudza chinzvimbo chavo chekupedzisa Ferrari isati yamupa kondirakiti muna 2019. NeFerrari Team, pakanga pasina muganho wekuti Leclerc aikwanisa kusimuka kuita mukurumbira sei.
Akatanga kuve mutyairi wegotwe kuti awane chinzvimbo chepamusoro muFormula yekutanga muBahrain uye akahwina mubairo wake wekutanga muBelgium, achiteverwa neItaly Grand Prix yake yekutanga mukati memazuva gumi nemana.
Nekukurumidza kumberi kunguva yekunyora, Ferrari's Leclerc tyisidziro yekubva kuMercedes Lewis Hamilton sezvo mutyairi wenhangemutange yeMonégasque akabudirira kupfuudza mumwe wake weBritish mumarudzi asingasviki matatu.
Akapedza zvakare padhuze neHamilton mune akati wandei. Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Charles Leclerc Hukama Hupenyu:
Charles Leclerc haasi kudanana panguva yekunyora. Muchokwadi, maive mumwedzi waGunyana 2019 kuti runako rweItari izvo zvino zvakapetwa seyaimbova musikana waLeclerc akazviita mubhuku rake renhoroondo yekufambidzana.
Chii chatinoziva nezvehukama uye zvaizotora nguva yakareba sei kuti Leclerc awane musikana mutsva?
Kutanga, Leclerc akatanga kufambidzana nemusikana-wekare musikana Giada Gianni mu2015. Ivo vaviri vaive chiratidzo chakakwana chevakaroora zvinangwa kubva pakutumira mafoto emazororo avo kusvika pakunakirwa nejeti-yekuisa mararamiro.
Gianni naLeclerc vakatomboitwa nerunyerekupe rwekuchata pane imwe nguva apo muchato ungadai usina kushamisa vateveri.
Nekudaro, ivo nerunyararo vakasarudza kuenda vakaparadzana nzira mushure memakore mana ekudanana vasina kuva nemwanakomana (kana) kana mwanasikana (s).
Nhau dzeakadururwa dzakaziviswa naGianni uyo akashandisa live Instagram post kuzivisa kuti mujaho aida kuzvipira iye amene kumhanya. Nekudaro, Leclerc ikozvino akasununguka kugadzirisa zvirongwa zvake zvekumisa zita rake mumabhuru yeFormula 1 ngano dzeupenyu.
Charles Leclerc Hupenyu hwemhuri:
Achifambira mberi kune hupenyu hweLeclerc yemhuri, anokudza kubva kunhangemutange ine rudo yepakati-yemhuri yemhuri. Tinokuunzira chokwadi nezvehupenyu hwemhuri yake.
Nezve baba vaCharles 'Leclerc:
Hervé Leclerc aive baba vekubereka vaCharles Leclerc. Aimbove mutyairi weFormula 3 makore Leclerc asati azvarwa uye akaenderera mberi nekuzivisa mujaho weF1 kune karting achiri mudiki. Mipiro yaHervé mukusimuka kweLeclerc mukurumbira haigone kuverengerwa.
Kunyangwe parufu, kuyeuka kwaLeclerc kwababa vake kunobatsira kuti arambe akatarisisa, kukura kunotaura zvakawanda nezvehukama hwababa nemwanakomana hwavaive nahwo Hervé asati afa muna 2017.
Nezve amai vaCharles 'Leclerc:
Pascale Leclerc ndiye amai vaCharles Leclerc. Amai vevatatu havana kungobatsira chete kusimudza mujaho nevanin'ina vake vaviri, asi vanogovana hukama hunoyemurika nevatatu vavo.
Zvinoita pasina kutaura kuti iye mbiru yakasimba yekutsigira kumashure kwezviitiko zvaLeclerc uyo anogara achitora kune ake enhau midhiya kumushuvira zuva rakanaka raamai.
Nezve hama dzaCharles 'Leclerc:
Charles Leclerc haana hanzvadzi asi mukoma mukoma anozivikanwa saLorenzo pamwe nemunun'una anozivikanwa saArthur.
Mudiki pane hama - Arthur ari kuvaka basa mujaho panguva yekunyora asi zvisina zvakawanda zvinozivikanwa nezvemukoma Lorenzo.
Kure kubva kumhuri yepedyo yaCharles Leclerc, hapana zvakawanda zvinozivikanwa nezve sekuru nasekuru naamai vake, uye hapana marekodhi evatete vake, vazukuru nevazukuru vake.
Saizvozvo, hama dzaLeclerc hadzina kuzivikanwa muzviitiko zvinozivikanwa zveupenyu hwake hwepakutanga kusvika zvino.
Charles Leclerc Hupenyu hweMunhu kure neF1:
Kutaura nezve hunhu hwaLeclerc, ane munhu anoshamisa. Imwe inoratidza kudzikama kwevanhu vanotungamirwa neCapricorn Zodiac Sign. Mukuwedzera, iye akadzikama, ane mutoro uye ane hanya.
Mutyairi wemujaho uyo anozivisa zvine mwero ruzivo nezve hupenyu hwake hwevanhu uye hwakavanzika ane zvaanofarira uye zvekunakidzwa zvinosanganisira kufamba, kukwira bhasikoro, kutamba nhabvu, kuteerera mimhanzi uye kushandisa nguva yakanaka nemhuri uye neshamwari.
Charles Leclerc Hupenyu:
Iwe unoziva here kuti Leclerc ine inofungidzirwa mambure anosvika mamirioni maviri emadhora panguva yekunyora? Makeups ehupfumi hwake hunobudikira ane mabviro awo muhoro wepagore. Mari yaanowana yekumhanya. Pamwe chete nemari inowanikwa kubva mukutsigirwa.
Saizvozvo, mutyairi wemujaho anorarama hupenyu hwomutambarakede. Imwe inova pachena mukusarudza kwake kwekuenda kuzororo. Zvakare kuva kwake nezvinhu zvinosanganisira mota yemhando yepamusoro yeFerrari.
Isu tinoziva zvishoma nezve chimiro uye nzvimbo yeimba inogara Leclerc. Hazvingatore nguva yakareba kuti chikamu chehupenyu hwemujaho chive pachena.
Charles Leclerc Untold Chokwadi:
Kutenderedza Charles Leclerc's Biography, hezvino zvishoma kana zvishoma zvinozivikanwa chokwadi nezvake.
Charles Leclerc Chitendero:
Leclerc haina kukura pachitendero. Nepo kunenge kusina zviratidzo zvinoratidza zvaanotenda. Panguva yekunyora Biography yake. Nokudaro, hazvigoni kutaurwa zvakakwana kuti mutendi here kana kuti kwete.
Charles Leclerc Tattoos:
Kusiyana neakawanda Formula 1 ma greats, Charles Leclerc haana ma tatoo. Kana vateveri havana ma tattoos ake panguva yekunyora.
Iye ari parunyararo nekunaka kwake uye haatarise hunyanzvi hwemuviri sechinhu chinodiwa chekuwedzera.
Thanks for reading vedu Charles Leclerc Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At biography yemwana, isu tinovavarira kurongeka uye kururamisira patinenge tichiendesa Biography yeFormula One Drivers.